Maxay dhulgariirro badani uga dhacaan Ecuador | Saadaasha Shabakadda
Sabtidii la soo dhaafay Abriil 16, 2016 Ecuador waxaa ku dhacay dhulgariirkeedii ugu xumaa tan iyo 1979. Tirada dhimashada 350, dhulgariirkii weynaa ee 7,8 ayaa sababay inuu dalka burburo. Waxaa jira dad badan oo guryo la’aan looga tagay, iyo kuwa kale oo aan dib ugu laaban karin guryahooda ilaa xaaladdu caadi ka noqoto. Tani waa goobta ugu xun ee aag adduunka ka mid ah oo ay jireen 40 dhulgariir 475 sano ee la soo dhaafay.
Su’aashu waxay tahay waayo?
Tan iyo bilowgii qarnigii la soo dhaafay, Ecuador waxaa jiray darsin dhaqdhaqaaq dhul gariir oo xoog weyn leh. Xaaladda waddanku waa mid ka mid ah sababaha dhaqdhaqaaqa dhulgariirku muhiim ugu yahay waddanka Ibero-American. Waana in Ecuador, sida dalal kale oo badan sida Chile, Bolivia, Panama, California ama Japan, ay ku jiraan waxa loogu yeero Wareegga Dabka ee Baasifigga. Gobolkani wuxuu dhererkiisu yahay 40.000 oo kilomitir, waana meesha ay ka dhacaan dhulgariirrada ugu xooggan iyo qaraxyada folkaanaha.
Aad iyo aad in la og yahay in 80% dhulgariirrada adduunka ugu daran waxay ka dhacaan ummadahaas, sida uu iftiimiyay agaasimaha aagga dhul-gariirka ee Machadka Juqraafiyeed ee Peru (IGP), Herando Taveras.
Qalabka tektonikada ee loo yaqaan 'plate tectonics' ayaa sababa dhacdooyinkan. Meeraha Dunida, ilaa dhalashadiisii, wuxuu had iyo jeer kujiraa isbadal joogto ah mahadnaqa dhaqdhaqaaqa taargooyinkaan dhaqaajinaya qaaradaha Marka la eego Badweynta Baasifigga, waxay dul saaran tahay dhowr ka mid ah, kuwaas oo isu-keena oo sababa khilaaf dhexdooda ah. Tani waa sida xiisaddu u dhismayso taas oo ay tahay in la sii daayo.
Marka laga hadlayo Ecuador, Chile, Peru iyo Colombia, dhaqdhaqaaqyada waxaa sabab u ah xaqiiqda in Nazca Plate tuubooyinka oo ku hoos yaal Saxanka Koonfurta Ameerika.
Halkan laga bilaabo waxaan jeclaan lahaa inaan ka soo diro a isku duubni iyo xoog loogu talagalay Ecuador. Inta badan, dhiirigelin badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Maxay dhulgariirro badani uga dhacaan Ecuador
Sidee buu yahay cimilada dooxooyinka adduunka?